Naya Bikalpa | जनताले कम्युनिष्टलाई दिएकाे भाेट पचेन ! - Naya Bikalpa जनताले कम्युनिष्टलाई दिएकाे भाेट पचेन ! - Naya Bikalpa
जनताले कम्युनिष्टलाई दिएकाे भाेट पचेन !
प्रकाशित मिती: २०७७ माघ १२, १४: ०१: १६
काठमाडाैं- विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएका नेता हुन् उज्ज्वल बराल । उनी अहिले नेपाली कांग्रेस सिन्धुली जिलाका सपभाति पनि हुन् । उनले २०५६ र २०६४ गरी दुई पटक सिन्धुलीबाट सांसद पदमा चुनाव लड्ने अवसर पाइसकेका छन् ।
सिन्धुलीको राजनीतिमा लामो अनुभव बटुलेका छन् । सधैं जनताको कामप्रति दत्तचित्त भएर लाग्ने उनी पद र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध खरो उत्रने उनी स्पष्ट वक्ता र जुझारु नेताको रुपमा चिनिन्छन् । सभापति बरालसँग यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नयाविकल्पका लागि कालिका महतले गरेको कुराकानीको संपादित अंश
पार्टीको काममै व्यस्त छु । नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु थिए । त्यो आन्दोलन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध थियो । हामीले उनले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध उभिन जनतालाई सुझाउने काम ग¥यौं । त्योसँगै नेपाली कांग्रेस तल्लो तहसम्मको सांगठनिक कामहरु पनि थिए । त्यसलाई पनि चुस्त, दुरुस्त र अझ बलियो बनाउने काममा जुटेको छु ।
केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमविरुद्ध जिल्लामा कस्तो अभियान चलाउनुभएको छ ?
मैले अभियान चलाएको होइन । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै हामीलाई निर्देशन गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, यसको विरुद्ध लाग्नुपर्छ भनेर । त्यो निर्देशनअनुसार जिल्ला, नगर, क्षेत्रहुँदै हामी वडासम्म पुगेका छौं । त्यो असंवैधानिक कदम विरुद्ध वडातहसम्म पुगेर जनतालाई सुझाउने काम गरिएको छ ।
दुई तिहाई निजक बहुमत भएर पनि काम गर्न नसक्ने कम्युनिस्टलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?
हामी जिल्ला, क्षेत्र, नगर र वडासम्म अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो । त्यसको हामीहरुले विरोध गर्नुपर्छ भन्दा जनताले ‘तपाइहरु किन ठूलो स्वर गरेर विरोध गर्नुहुन्छ ? हिजो कम्युनिस्टलाई जनताले बहुमत दिएर पठाए । त्यो बहुमत उनीहरुलाई पचेन । कम्युनिस्टहरुले सरकार चलाउन सकेनन् ।
अब हामीले नेपाली कांग्रेसको आशा गरेको छौं । त्यसकारण तपाईंहरु झन् चुनावको पक्षमा लाग्नुपर्नेमा किन विरोध गर्नुहुन्छ ? के तपाईंहरु चुनावबाट भाग्न लाग्नुभएको हो ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । अहिले त चुनाव हुनुपर्छ अब कहाँको संसद् पुनस्थापना गर्ने भन्ने खालको कुराहरु चले । यसरी हिजो कम्युनिस्टलाई दु्ई हाराहारी मत दिएर बहुमतको सरकार बनाउन दिँदा धोका दिएपछि जनताले त्यो मत फिर्ता लिन खोजेका छन् । त्यसकारण जनताहरु संसद् पुनस्थापना होइन चुनावको पक्षमा छन् ।
त्यसोभए कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दकमलाई किन असंवैधानिक कदम भनेर उफ्रिएर हिँडेको त ?
लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली कांग्रेसले बनाएको हो । विधि, विधान र सिद्धान्ताको राजनीति गर्ने कांग्रेस हो । फेरि संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरुलाई कांग्रेसले नै ल्याएको हो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस विधिको शासन मान्ने भएकाले चुनावमा जाँदा पनि विधिसम्मत ढंगले जानुपर्ने भनेर यो कदमलाई असंवैधानिक भनेका हौं ।
जनताले नेपाली कांग्रेसले त खुरुक्क चुनावमा जाँदा राम्रो भन्दा पनि हामीले चुनावमा चाहीं जाने हो तर, विधिसम्मत तरिकाले जानुपर्छ भनेका छौं । अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले त्यो असंवैधानिक कदम हो ।
संविधान बनाउन त अरु दलको पनि योगदान थियो नि ?
यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनाइएको हो । त्यसपहिला चार जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए तर उनीहरुले संविधान बनाउन सकेनन् । दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभा ९ वर्षसम्म अलमलमा प¥यो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँको नेतृत्वमा संविधान बनाएर घोषणा भएको हो । यो संविधान घोषणा गरेबापत सुशील कोइरालाले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । त्यसैले यो संविधानमा नेपाली कांग्रेसको योगदान र लगानी छ । कम्युनिस्टहरुलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास र भरोसा छैन । उनीहरु संसदीय व्यवस्था विरोध हुन् । त्यसकारण पनि केपी ओलीले सजिलै विघटन गरिदिनुभयो । तर, यसको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेस सधंै दिलो ज्यान दिएर लडिरहन्छ ।
बहुमत दिएर पठाउँदा पनि चलाउन नसकेर संसद भंग गरेकाले जनता कम्युनिस्टको विपक्षमा उभिएका हुन् ?
मैले गाउँगाउँमा गएर जनतासँग प्रत्यक्ष बुझ्दा यो बेलामा कांग्रेसले चुनावमा लाग्नुपर्छ । अब नारा जुलुस गरेर हुँदैन भन्ने पक्षमा जनता छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकै भए पनि चुनाव हुन्छ भने त्यसमा जाँदा नेपाली कांग्रेसलाई राम्रो भन्ने धेरै पाएँ । यो सबैंलाई हेर्दा जनताहरु कम्युनिस्टहरुको क्रियाकलापले वाक्क, दिक्क भएका रहेछन् भन्ने लाग्यो ।
त्यसोभए नेपाली कांग्रेसप्रति जनआकर्षण ह्वात्तै बढ्यो हो ?
कम्युनिस्टहरुको कुरा बढी काम नगर्ने कारणले वाक्क भएका जनताको नेपाली कांग्रेसप्रति व्यापक मोह जागेको पाइन्छ । म जति ठाउँमा पुगेँ पहिलाकोभन्दा हामीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको रहेछ । नेपाली कांग्रेसले मात्रै अब यो मुलुक चलाउन सक्छ भन्ने जनधारणा पाएँ । जनताले हिजो कम्युनिस्टहरुले मिठा भाषण गरे ।
हामीले पनि यसले त विकास गर्छ क्यार भनेर भोट दियौं । झन्डै दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बन्यो । अब देश विकास हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका थियौं तर कम्युनिस्टहरुले त्यो थेग्न सकेनन् । त्यसैले पनि हामीले कांग्रेसलाई त्यो जिम्मेवारी दिन खोजेका हौं भनेर जनताले भनेका छन् ।
त्यसोभए कम्युनिस्टप्रति जनविश्वास घटेको हो ?
त्यो त हामीले प्रत्यक्ष देखिएको छ नि । हामीले जिल्लाका जुनसुकै ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नेको लहर देखिन्छ । त्यसमा व्यापक रुपमा युवा र महिलाहरु हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि कम्युनिस्टमा जुझारु ढंगले लागेका महिलाहरु धेरै आउनुभएको छ । उहाँहरुले यो मुलुकमा विधिको शासन नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्छ सक्छ त्यसैले हामी आयौं भन्नुभएको छ । अहिले जनताले त हिजो हामीले कम्युनिस्टलाई भोट दियौं । तर, त्यो उनीहरुलाई पचेन अब आउने चुनावमा फिर्ता लिन्छौं भनेका छन् ।
जनताको चाहना चुनावतिर अब नेपाली कांग्रेसले के गर्छ त ?
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले कहिल्यै पनि चुनावबाट भाग्दैन । हामी नेपाली कांग्रेस भएकै विधि र पद्धति मान्नलाई हो । अहिले एउटा व्यक्तिको अहंकार, घमण्डले र उत्तेजनाले संविधानमाथि ठाडै बलात्कार भयो । त्यो संविधानलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । प्रधानन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो या होइन ।
तर, कांग्रेसले त असंवैधानिक कदम हो भनेर ठहर ग¥यो । यसको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि छ । सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसको कांग्रेसले स्वागत गर्छ । हामी विधि, पद्धति र कानुन मान्ने विधिको शासन चाहने भएकाले सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मान्छौं । निर्वाचनमै जानुपर्ने भए छ भने त्यसलाई नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले अस्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन ।
अब सर्वोच्चले पुनस्थापना हुनुपर्छ भने छ भने पनि ठीक र होइन केपी ओलीले घोषणा गर्नुभएको ठीक छ भनेर आयो भने पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो चुनावबाट भाग्ने कुरा आउँदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि बहुदलको तर्फबाट कांग्रेसले चुनाव लडेको थियो ।
त्यसोभए तपाँइ गाउँ डुल्ने क्रममा जनताबाट कांग्रेस चुनावमा जानुपर्ने सुझाव पाउनुभयो ?
उहाँहरुले यति बेला कांग्रेसलाई राम्रो अवसर छ खुरुक्क चुनावमा जानुहोस् भनेका छन् । विरोध गरेर बढी नकराउनुहोस् भनेका छन् । जनताले त हामीले हिजो कम्युनिस्टलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन म दिएका हौं ।
उनीहरुले त्यो थेग्न सकेनन् । कोरोना कहरले जर्जर भएको मुलुकलाई चुनावी आगोमा फालिदिए भन्ने जनगुनासो पाएको छु । त्यसैले यो अवसर कांग्रेसले गुमाउनु हुँदैन । कामै गर्न नसक्ने संसद् किन पुस्थापना गर्नु भन्ने उनीहरुको तर्क छ ।
तपाईं दुई पटक चुनाव लडिसक्नुभयो, त्यो समय र अहिले जनतामा कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?
त्यो बेलाभन्दा अहिले धेरै भिन्न्ता पाएँ । पहिला कांग्रेसले केही गरेन कम्युनिस्टलाई भोट दिने भन्ने थियो । त्यसले हामीप्रति आकर्षण घटेको थियो । अहिले अब कांग्रेस आउँछ त्यसैले केही गर्छ भन्ने आशा गरेको पाएँ । खासमा भन्नुपर्दा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई आशा र भोरोशाको केन्द्रमा राखेर हेरेको पाएँ ।
२०७० सालको निर्वाचनमा माओवादीलाई हराउनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले सिंगो नेकपालाई हराउनुपर्छ भन्ने जनआवाज सुनिन्छ । गाउँमागउँमा नेपाली कांग्रेसको झण्ड देख्नेबित्तिकै जयनेपाल भनेर बच्चाबच्चाले भनेको सुनिन्छ ।
तपाँइ टिकट त पाइहाल्नुहुन्छ, चुनाव जित्ने आधार र रणनीति के के छन् ?
टिकट पाउने नपाउने भन्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले तय गर्ने कुरा हो । तर, समग्र सिन्धुली जिल्लाको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिको अध्ययन गर्दा जनविश्वास पाएको छु । मैले चार वर्ष नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएर काम गरिरहँदा पनि साथीभाइहरुबाट त्यो खालको साथ, सहयोग माया पाइराखेको छु ।
म सांसद नभएपनि गाउँगाउँ, वडा–वडामा पगेर जनताको काम गरिरहेको छु । जनताका हरेक सुखदुःखमा आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेको छु । त्यो देखेर जहाँका साथीभाइहरु उज्ज्वल दाइले नपाएर कसले टिकट पाउँछ भन्ने धेरै छन् । मैले जनताको कामको लागि आफ्नो घर, परिवार नभनी २४ सैं घण्टा लागिपरेको छु । मेरो काठमाडौंमा घर भएपनि जनताको कामको लागि सिन्धुलीमै बसिरहेको छु ।
जनतालाई परेको समस्याको समाधानको लागि सत्तामै हुनुपर्छ भन्ने छैन । फेरि नेपाली कांग्रेस भनेको आइपरेका समस्याको समाधान गर्न पनि उभिएको पार्टी हो । त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ । म आफूले टिकट पाउनुपर्ने भनेर मात्रै लागेको होइन । टिकट काम गर्ने मान्छेलाई पार्टीले न्याय गरिहाल्छ त्यो ठूलो कुरा भएन । तर, राजनीति गर्ने मान्छेले जनतालाई समस्या परेको बेला काम गर्नुपर्छ ।
सिन्धुलीका सबैं नगर, गाउँ र क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम लिएर जानुभयो हो ?
हो, सिन्धुलीका सबैं गाउँ, नगर, वडातसम्म मैले विरोधका कार्यक्रम लिएर गएँ । सबैतिरका साथीभाइहरुको राम्रो सहानुभूति पाएको छु । हामीले आयोजना गरेका विरोधका कार्यक्रमहरुमा उत्साजनक उपस्थिति भयो । त्यो सबैलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसप्रति राम्रो आकर्षण बढेको छ ।
केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम त कांग्रेसलाई जनतासमक्ष जाने कोसेली बनाइदियो होइन ?
उहाँले जसरी संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् भंग गरेर लोकतन्त्रमाथि नै आँच आउने काम गर्नुभएको छ । त्यसको हामी खुलेर विरोध गर्दछौं । नेपाली कांग्रेस विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी भएकाले जननिर्वाचित संविधानमाथि जसरी बलात्कार भएको छ ।
त्यो कांग्रेसलाई मान्य छैन । केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर एकदलीय अधिनायकवाद लाद्न खोजेको प्रति कांग्रेसको घोर आपत्ति छ । अब संसदै विघटनगरेर अहिले त्यसमाथि असंवैधानिक कदम भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
त्यसको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै छ । नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, विधान शासन मान्ने पार्टी भएकाले अदालतको निर्णयलाई पनि मान्नुपर्छ । म नेपाली कांग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेता भएकाले त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ । उज्ज्वल बराल नेपाली कांग्रेस सिन्धुलीका सभापती हुन् ।
२०७७ माघ १२, १४: ०१: १६